राज कुन्द्रा कस्तो किसिमका फिल्महरू बनाउँछन् ? सँगै ३ फिल्ममा काम गरेकी गेहना वशिष्ठले खोलिन् यस्ता रहस्य – Purba Aawaj
राज कुन्द्रा कस्तो किसिमका फिल्महरू बनाउँछन् ? सँगै ३ फिल्ममा काम गरेकी गेहना वशिष्ठले खोलिन् यस्ता रहस्य
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०६, २०७८ समय: १७:२१:१८
एजेन्सी , राज कुन्द्रा घटनामा गेहना वशिष्ठको नाम पनि आएको छ। गेहना पनि यस्तै घटनामा केही महिना जे लमा बसेर भर्खरै वाहिर आएकी छन् ।
उनलाई लगाइएको आरोप प्रमाणीत नभएपछि उनी बाहिर आएकी हुन् । भारतीय मिडिया आजतकलाई दिएको अन्तरवार्तामा गेहनाले भनिन्, ‘म अहिले मुम्बई बाहिर छु।
म भन्न चाहन्छु कि मानिस अ श्‍ली ल सामग्रीको बारेमा कुरा गरिरहेछन्, ति कुनै पनि फिल्म अ श्‍ली ल छैनन् । यी धेरै साहसी र का मु क फिल्महरू हुन्। जुन अ श्‍ली ल भनिएका छन् । यो गलत तरीकाले प्रस्तुत गरिएको छ।
म तिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि जब सम्म तपाईं फिल्म हेर्नुहुन्न, तपाईं कसरी यसलाई अ श्ली ल भन्न सक्नुहुन्छ ? मलाई लाग्छ मानिसहरुले अ श्ली ल र वयस्क चलचित्र बीचको भिन्नता पनि बुझ्दछन् ।
पहिला ति फिल्म हेर्नुस् अनि मात्र त्यस वारेमा धारणा बनाउनुहोस् । मैले राजसँग तीन फिल्ममा काम गरें
गेहनाले भनिन्, मैले राज कुन्द्रासँग तीनवटा फिल्ममा काम गरें। मैले उसको चलचित्रमा अभिनेत्रीको रूपमा काम गरेको छु।
राजले मलाई कहिले द,बाब दिएका छैनन्। र केहि पनि लुकाइएको छैन । कागजमा एउटा कुरामा सहमति गर्ने र सेटमा अर्को काम गराउने हुँदैन । निकै ब्यवसायीक तरिकाले त्यहाँ काम हुन्छ । त्यहाँ मैले गरेका सबै फिल्महरुलाई अ श्‍ली ल भन्नु गलत कुरा हुनेछ। ति फिल्ममा भन्दा मैले बालाजीको गन्दी बातमा अधिक का मु क दृश्यहरू गरें।
राजलाई गलत आ`रोप लगाईदै छ
गहना भन्छिन्, ुजब म उनीसँग अभिनेत्रीको रूपमा काम गर्दैछु र त्यहाँ कुनै दबाब आएको छैन, तब कसरी म कसरी विश्वास गर्ने कि राजले केटीहरूलाई काम गर्न बाध्य तुल्यायो। मलाई झन्डै पाँच महिना जे ल मा राखियो।
त्यहाँ आरोप लगाइएको थियो कि मैले सेटमा भेट गरें जबकि म त्यस दिन सेटमा थिइनँ। मलाई ७ तारिख अदालतमा बोलाइएको थियो। ५ तारिख मा म दिनभर पुलिस स्टेशनमा थिएँ, तिनीहरूले मेरो विरुद्धमा केहि पनि फेला पारेनन्, त्य
सपछि मलाई फिर्ता पठाइयो, त्यसपछि मेरो छेउछाउको कथा सुनाए पछि मलाई जे ल पठाइयो। बाहिर जे देखाइएको
थियो त्यो फरक थियो र सत्य के हो त्यो बिल्कुलै फरक छ। मलाई सामूहिक कर णी को आरोप लगाइएको थियो । राज कुन्द्राको साथ पनि यही नै भइरहेको छ। मलाई पनि गलत भयो र राजलाई पनि गलत गरियो।
Last Updated on: July 21st, 2021 at 5:21 pm